विश्वकप क्रिकेटः कुन टिमले कति रकम पाए? - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकप क्रिकेटः कुन टिमले कति रकम पाए?
काठमाडौं, असार ३० । इंग्ल्यान्ड र वेल्सले सम्पन्न १२औँ एकदिवसीय विश्वकपको उपाधि इंग्ल्याण्डले जितेको छ । सुपर ओभरमा न्यूजिल्याण्डलाई हराउँदै इंग्ल्याण्डले विश्वकपको उपाधि जितेको हो । जीतसँगै इंग्लिश टिमले ४० लाख डलर पाएको छ । नेपाली रूपैयाँअनुसार यो ४३ करोड ६० लाख पाएको छ । यसैगरी उपविजेता न्यूजिल्याण्डले २० लाख डलर पायो ।
ट्याग्स: Newsland vs England, Super over, winner team england, world cup cricket 2019